काठमाडौं, को’रोनाभाइरस महामारीका कारण विद्यालय बन्द भयो । त्यसपछि ५ कक्षाकी विद्यार्थी तुलसी घरमै बस्न बा’ध्य भइन् । विद्यालयले पढाइ सुरु गरेको तुलसीले जानकारी पाइन् तर उनी कक्षामा उपस्थित हुन स’क्दिनथिन् ।
कक्षा, अनलाइनबाट च’लिरहेको थियो र यसका लागि तुलसीसँग स्मा’र्टफोन थिएन । त्यसैले स्मार्टफोन किन्ने पैसा जम्मा गर्न उनले सडक कि’नारामा आँप बेच्न थालिन् ।यी बालिकाको कथा समाजिक संजालमा यसरी भाइरल भयो कि उनको सपनाले उडान भर्न पाउने भएको छ ।
तर, पढाइको लागि ती बालिकाको सं’घर्ष देखेर ती व्यक्तिले यति म’हंगोमा आँप कि’निदिएका थिए ।भारती’य मिडियाका अनुसार भारतको झा’रखण्ड राज्यको ज’मशेदपुरमा स्ट्रे’ट मा’इल्स रोडमा बं’गला नम्बर ४७ को आ’उटहाउसमा बस्ने ११ वर्षकी तुलसी ५ कक्षाकी छात्रा हुन् ।
उनको, परिवारको आर्थिक अ’वस्था कमजोर छ । उनको परिवारले उनलाई पढाइरहेका त थिए तर को’रोनाकालमा स्कुल ब’न्द भए । स्कुल ब’न्द भएपछि अनलाइन कक्षा सुरु भयो तर तुलसीको पढाइ भने ठप्प भयो किनकि उनीसँग स्मा’र्टफोन थिएन ।तुलसीले पैसा जुटाउन आँप बेच्न थालिन् ।
उनले, आफू बस्ने ‘बंगलाको बगैंचामा फ’लेका पाकेका आँप टिपेर ल्याएर सडकमा बे’चिरहेकी थिइन् । यस क्रममा तुलसीको यो क’हानी सामाजिक संजालमा भाइरल भयो । सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको यो क’हानी मुम्बइको भ्या’लुएबल ए’डुटेनमेन्ट कम्पनीमा उपाध्यक्ष अमे’या हे’तेसम्म पुग्यो ।
त्यसपछि, उनले तुलसीलाई सहयोग गर्न अगाडि आए ।उनले तुलसीका १२ वटा आँप प्रतिआँप १० हजारका दरले १ लाख २० हजारमा कि’निदिए । अब अमेया हेतेले तुलसीको सपनालाई नयाँ उ’डान दिएका छन्, तुलसी कहाँसम्म पुग्छिन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
यो पैसाबाट, लुतसीले १३ हजार रुपैयाँमा स्मा’र्टफोन किनेकी छिन् । बाँकी रकम उनले अ’गाडिको पढाइको लागि राखेकी छिन् । अब भने उनी सडक कि’नारामा आँप बे’चिरहेकी दे’खिन्नन ।
२०७८ आश्विन १७, आईतवार ०७:१३0Minutes 189 Views
तनहुँमा अ’च’म्मको बिहे: साइकलमै गए जन्ती, बेहुलाले साइकलमै चढाएर भित्राए बेहुली हेर्नुस् !
८२ लाखमा गाउँमा धारैधारा ! (फोटो फिचर)
पूर्व प्रहरीको लाजमर्दो हर्कत,आफ्नै बुहारी लिएर बेपत्ता । कोठामा पुदा रातारात फरार ( हेर्नुहोस भिडियो सहित )